ဗေဒင် ယတြာ Archives •
18/11/2019 Yan Naing 0
အိမ်တွင်းရေး နှင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေသည့် ယတြာ အိမ်တွင်းရေး အဆင်ပြေစေသည့် ယတြာခန်း လွယ်ကူတဲ့ ကုသိုလ်ယတြာပညာခန်းတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အနည်းဆုံး ၂-ကြိမ်မက ယုံယုံကြည်ကြည် ရွှင်ရွှင်ပျပျ ပြုလုပ်ကြပါနော်။ ဇနီးမောင်နှံ အရေးသာမက မိဘနဲ့သားသမီး ညီကိုမောင်နှမချင်းအတွက်လဲ ထိရောက်စေပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ နာမည်ရှင်များပြုရန် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်နံကို ပယ်စွန့် Continuous reading
အကြွေးမဆပ်နိုင် ဖြစ်နေသူနှင့် အကြွေးတောင်းမရဖြစ်နေသူတို့ အတွက် မုန့်လုံးရေပေါ် ယတြာ
17/11/2019 Yan Naing 0
အကြွေးမဆပ်နိုင် ဖြစ်နေသူနှင့် အကြွေးတောင်းမရဖြစ်နေသူတို့ အတွက် မုန့်လုံးရေပေါ် ယတြာ တနင်္ဂင်္နွေ သားသမီးသည် မေမြို့ပန်း ၅ပွင့် မုန့်လုံးရေပေါ် ၄၅လုံးကို တနင်္လာနေ့ နံနက် ၁၀နာရီတွင် ဘုရားလှူပါ။ တနင်္လာ သားသမီးသည် ရွက်လှ ၁၂ညွန့်နှင့် မုန့်လုံးရေပေါ်. ၃၄လုံးကို အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၈နာရီတွင် Continuous reading
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့ အကြောင်း
ဒေါသကြီးသလို အစွဲအလန်းလဲကြီးတဲ့ စနေ သားသမီးတို့ အကြောင်း ချစ်သူက စနေ သားသမီးလေးဆိုရင်တော့ စနေသားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်ကြပ်ါတယ် …. ။ ​စ​နေ သားသမီး​ကို ချစ်သူတော်မယ် Continuous reading
သင့်ရဲ့ နက္ခတ် နှင့်သင့်အကြောင်းများ သိကောင်းစရာ
15/11/2019 Yan Naing 0
သင့်ရဲ့ နက္ခတ် နှင့်သင့်အကြောင်းများ သိကောင်းစရာ မိမိရဲ့မွေးခုကို ကြည့်ပြီး ဘာနက္ခတ်လည်းဆိုတာ ကြည့်လို့ပါပြီ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်တွက်နည်း ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် မွေးခုနှစ်ထဲက ( ၆၃၈ ) ကိုနုတ်ပါ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။ ( ၁ ) လပိုင်းကနေ ( ၄ )လပိုင်း Continuous reading
(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်ခုနှစ် တနင်္လာသားသမီများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း…
06/11/2019 Yan Naing 0
(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်ခုနှစ် တနင်္လာသားသမီများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း… တနင်္လာသားသမီးတို့သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ရတတ်သည်။ မိမိဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ထားသော လုပ်ငန်းများသက်ဝင်အောင် လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။သို့်သော်အကြီးအကဲများ၏ အားပေးထောက်ခံမှုများရ ရှိမည်။ အမျိူးသားကောင်းတို့သည် ဤနှစ်တွင် ကံထူးသူများဆိုလျှင် မမှားပါဘု။လုပ်ငန်းခွင်တွင် လာဘ်လာဘ အခွမ်းအလမ်းများစွာထွက်ပေါ်လာမည်။ အလိုဆန္ဒများလည်း ပြည့်ဝနိုင်သည်။ အပေါင်းအသင်းဆွေမျိုးများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များ ဆောင်ရွက်တတ်ရတတ်သည်။ အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်း ကိစ္စများအတွက် Continuous reading
02/11/2019 Yan Naing 0
ယခုနှစ်တွင်မိမိလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်အကိုင်မှာအကျိုးအမြတ်ထူးထူးခြားခြားရရှိပါလိမ့်မည်။အလှူ အတန်းပြုရခြင်းနှင့်မင်္ဂလာပွဲများ စီစဉ်ပေးရခြင်းများ ပြုလုပ်ရတတ်သည်။အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ခြင်း ရွှေဝင်မည် ရတနာပစ္စည်းများဝင်မည်။စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ငန်းများပေါ်လာလိမ့်မည် လုပ်လျှင်အောင်မြင်၍ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းဖြစ်စေကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်မည့် ကာလနှစ်ဖြစ်သည် …။ မိမိအလိုဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ရန်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစီမံခန့်ခွဲပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရမည်။မိတ်သင်္ဂဟအခြွေအရံများပေါများလာအောင်လူမှုရေးကိစ္စများလုပ်ပါ။အများလေးစားကြည်ညို ခံရတတ်ပြီးဘဝ အထွဠ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိပါမည်။ အဝိစီ၊ရေတွင်း၊ရေကန်ကိစ္စ များဆောင်ရွက်လျှင်အောင်မြင်မည်။ အဖိုးတန်ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမည်။ဘုရာဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါသည် Continuous reading
(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်ခုနှစ်တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက်တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီများတို့သည် မိမိတို့ ဘဝခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် အထူးကြိုးစားအားထုပ်လုပ်ကိုင်ရသောနှစ်ဖြစ်သလို့ မိမိအကြံအစည်များအောင်မြင်မည်ဖြစ်၍ လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်ပြီးတော့ အကြံအစည်သစ်များဆောင်ရွက်ရမည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ အခန်း၊ ဌာနေ အပြောင့်အရွေ့၊ အလဲလှယ်အပြောင်းအလဲများရှိမည်။ ထီးပေါက်ကိန်း ရှိသည် …။ စီးပွားရေး..ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ရင်းနှီးမတည်ပြိး အားသွန်ခွန်စိုက် ရဲဝံ့စွန့်စား လုပ်ကိုင်ပါ။ပြည်တွင်း, ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကွန်ပျူ Continuous reading
01/11/2019 Yan Naing 0
ငွေဝင်ရွှေဝင်ရက်နှင့် မတင်ဘူးဖြစ်နေလျှင် ယတြာ အဖိုးတန်ရတနာများ မြဲမြံ တိုးပွားစေဖို့ ငွေ ဝင်တော့ဝင်တယ် မမြဲဘူး ဝင်တာများလည်း ထွက်တာများတယ် ဆိုသူတွေအတွက် ဆောင်ရွက်စရာနည်းတစ်ခုပါ ။ မိမိမြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို ၇ နဲ့စားပါ အကြွင်းအလိုက် ဖော်ပြပါနည်းကို ပြုလုပ်ပါ ။ ၁. ကြွင်းး ငွေကို နီညိုရောင်ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ထည့်ပါ Continuous reading
31.10.2019မှ6.11.2019ထိ ၇ရက် သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
31/10/2019 Yan Naing 0
31.10.2019မှ6.11.2019ထိ ၇ရက် သားသမီး တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ၊လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ခြင်းတွေ၊အသစ်လဲလှယ်ခြင်းတွေဆောင်ရွက်လို့ ကောင်းပါတယ်။နာမည်ကောင်းနှင့်ကျော်ကြားတတ်တဲ့ကာလပါပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးအလုပ်များ၊စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး အလုပ်များအဆင်ပြေတိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ ရွှေနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းများ အဆင်ပြေတိုးတတ်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီရနိုင်သလို ဆရာသမားတွေဆီကအကြံကောင်းတွေရလာတတ်ပါတယ်။ အလုပ်သစ်၊ဆိုင် သစ်စီးပွားသစ်စတင်လို့ကောင်းပါတယ်။ အိုင်တီပစ္စည်းများ ဝယ်ယူမဲ့သူတွေကတော့ ထင်ထားသည်ထက်အကုန် အကျပိုများနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးများသိသာထင်ရှားစွာတိုးတတ်လိမ့်မယ်။ လခစားဝန်ထမ်းများ မိမိကြိုးစားမှုကို Continuous reading